RA’IISAL WASAARE KU XIGEENKA AAN DHICIN (Ma jirtaa arrin muhiim ah oo uu ka gaabiyay?) – Maanta Online
Ra’iisal Wasaare Ku xigeenka Dowladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa noqday shaqsigii ugu horeeyay ee ku cimri dhameysta jagadii looga magacaabay xukuumadaan cimrigeedu gabaabsiga yahay, iyadoo siyaabo kala duwan loo dhigay waxyaabaha uu ku muteystay ayaa hadana waxaan idiin soo gudbineynaa taariikhda waayihiisa iyo 3-da sano ee uu xilkaasi hayo.
Avv. Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ugu horeyn waa aqoonyahan dhinac kasta ka dhisan, isla markaana xilal kala duwan oo arrimaha garsoorka u badan ka soo qabtay dalka gudihiisa iyo qaar ka mid ah wadamada caalamka.
Xulitaanka ninkaan aqoonyahanka ah ayaa muhiim u ahaa jagooyinka ugu sarreeya dalka maadaama uu ka soo jeedo gobollada Waqooyi Bari Soomaaliya ee madax bannaanida iskiis ah ku dhawaaqay sanadkii 1991-kii, isagoo Ra’iisal Wasaarihiisa aysan marnaba soo kala dhex gelin madmadow la xariira howlaha ay ka wadaan xafiiska Golaha fulinta Dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Ra’iisal Wasaare Ku xigeen Mahdi Maxamed Guuleed sida muuqata waxa uu iskoor ka heystaa raggii isaga uga horeeyay jagada Ku xigeenka Ra’iisal Wasaaraha, kuwaasi oo iyagu intooda xafiiska faaruqi jiray marka la rido madaxdii isaga soo magacowday, waxaana muuqata inuu iminka yahay shaqsiga saddexaad ee siyaasadda madaxdii soo martay dowladnimada Soomaaliya ku leh taariikh aan tirmeyn.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo muddo xileedkeeda uu ka dhiman yahay hal sano, Ra’iisal Wasaare Ku xigeen Khadar wuxuu door muuqda ka qaadanayaa sidii ay dowladda ku gaari laheyd ka mira dhalinta yoolalka ugu muhiimsan oo ay ka mid tahay inay dalka gaarsiiso doorasho qof iyo cod ah.
Marka Ra’iisal Wasaarihiisa Xasan Cali Kheyre dalka ka maqan yahay isaga waa Ku sime idman oo aan la magacaabin, wuxuuna gudaha dalka ka sii wadayaa howlihii kala duwanaa xafiiska Wasiirka koowaad iyo midii uu isagu ku magacownaa taasi oo aan horay uga dhicin labadii xukuumadood ee ka horeeyay dowladda Soomaaliya.
Dhinaca kale maadaama lagu jiro xilli kala guur oo muddo sanad ah ka harsan tahay dowladda Madaxweyne Farmaajo waxaa lagu dhaliilaa inaysan daacad ka aheyn dadaallada iyo gogol xaarka doorasho qof iyo cod ah inay dalka ka dhacdo, waxaana inta badan dhacda in madaxda horay u soo qabtay ay ka mid noqdaan musharaxiinta dowladda iyaga ka dambeysa.
Muxuu ka gaabiyay mudada uu xilka hayay Dowladda FS?
Ra’iisal Wasaare Ku xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka soo jeeda beelaha degan Waqooyiga Soomaaliya ee haatan uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somaliland, ayaa ka mid ah Avv.Mahdi Maxamed Guuleed arrimaha ugu muhiimsan oo ah wadahadalada Dowladiisa iyo maamulka Muuse Biixi hoggaamiyo.
Heshiis dhex mara labada dhinac oo ahaa howlaha looga fadhiyay xukuumadda ayaa mudadii saddexda sano aheyd laga soo qaadin meeshii uu uga tegay Dowladdii tan ka horeeyay ee uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana eeda arrintaasi lug ku yeelanaya Ra’iisal Wasaare Ku xigeen Mahdi Guuleed.
Khubarada ku xeel dheer arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa saadaalinaya Ra’iisal Wasaare Ku xigeen Mahdi Maxamed Guuleed Khadar inuu ka mid noqonayo shaqsiyaadka ugu horeeya ee daneynaya xafiiska Ra’iisal Wasaaraha dowladda cusub, bacdamaa uu yahay nin la hubo aqoonta, waaya aragnimada iyo kartida uu u leeyahay kursiga Wasiirka Koowaad.
Saadaasha khubarada siyaasadda waxay tilmaameysaa in haddiiba sida ay tahay u dhacdo oo Mudane Khadar ku guuleysto in loo magacaabo Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya cagaha saartay wadadii saxda ahayd oo ku taagan dastuurkii 1960-kii kaasoo tilmaamayay sida ay jagooyinka u kala qeybsanayaan gobolada Waqooyiga iyo Koonfurta Soomaaliya.
Arrimuhu si kastaba ha ahaadeene, waxaa wax lala yaabo ah in isbedellada Soomaaliya ka dhacayay ay haatan ku soo korortay sameynta xisbiyo siyaasadeed oo tiro beel noqday, kuwaasi oo iyagu doonaya inay halgan dheer u galaan sidii ay ku hanan lahaayeen kursiga ugu sareeya dalka amaba ugu yaraan door weyn uga ciyaari lahaayeen arrimaha siyaasadda.
← Somalia to Push for Voter Registration Ahead of 2021 Elections
Xisbi siyaasadeed Muqdisho ku qabtay kulan weyne aan loo kala harin →